napetraky ttravis ny Thu, 10 / 24 / 2019 - 13: 38
Nisy olona nijirika ny tranokala. Mila nivadika tamin'ny backup iray aho herinandro vitsy lasa izay ary very ireo hevitra vitsivitsy farany indrindra (tao amin'ny tranokala fa tsy facebook). Raha nametraka fanontaniana ao amin'ny tranokala ianao ary tsy nahazo valiny, andramo manandrana indray. Miorina ny olana misy ankehitriny. Raha ny tokony ho izy dia misy olona mikaroka Google momba ity tranokala ity, hoy ny ampahany na ny motera ary tsindrio ny rohy fikarohana Google ianao, dia navadika tamin'ny takelaka spam mivarotra crap ianao. Ny olana dia raikitra fa tsy ny mijery azy aho. Antenaina fa tsy nanelingelina olona izany.